30 Days/Dae/Izinsuku December 2012 / January 2013
This edition of 30 days covers news items from December 2012 and January 2013, covering prison conditions, escapes, unsentenced prisoners, South Africans imprisoned abroad, and news from other African countries.
November 2012 AFRICAN PRETRIAL JUSTICE MONITOR
30 Days/Dae/Izinsuku November 2012
This edition of 30 Days/Dae/Izinsuku covers news items reported during November 2012 on prison conditions, rehabilitation, unsentenced prisoners, sentencing and parole and South African prisoners abroad.
30 Days/Dae/Izinsuku October 2012
This edition of 30 Days/Dae/Izinsuku covers news items from October 2012 on governance and corruption, parole and sentencing, prison conditions, unsentenced prisoners and rehabilitation, as well as prison related news from other African countries.
October 2012 AFRICAN PRETRIAL JUSTICE MONITOR
Submission to 52nd Session, African Commission on Human and Peoples' Rights
Tackling the Entry Point to the Criminal Justice System
Statement submitted to the 52nd session of the African Commission
This statement calls on the Commssion to start the process of developing a guideline on the use and conditions of police custody and pre-trial detention for Africa.
September 2012 AFRICAN PRETRIAL JUSTICE MONITOR
Draft Resolution on the Use and Conditions of Police Custody and Pretrial Detention in Africa, Zero Draft, April 2012
30 Days/Dae/Izinsuku September 2012
This edition of 30 Days/Dae/Izinsuku covers news items from August 2012 on governance and corruption, prison conditions and escapes, as well as prison related news from other African countries.
August 2012 AFRICAN PRETRIAL JUSTICE MONITOR
30 Days/Dae/Izinsuku August 2012
This edition of 30 Days/Dae/Izinsuku covers news items from August 2012 on governance and corruption, parole and sentencing, prison conditions, South Africans imprisoned abroad and rehabilitation, as well as prison related news from other African countries.
July 2012 AFRICAN PRETRIAL JUSTICE MONITOR
30 Days/Dae/Izinsuku July 2012
This edition of 30 Days/Dae/Izinsuku covers news items from July 2012 on governance and corruption, parole and sentencing, extraditions, prison conditions, South Africans imprisoned abroad and rehabilitation, as well as prison related news from other African countries.